Rastra Daily | बसमा खिया मन छिया छिया
बसमा खिया मन छिया छिया
व्यवसायीको बिजोग, मजदुरको झनै बिजोग
रबिन भट्टराई । १असाेज विराटनगर : विराटनगर–८ मधुमाराका लोकेन्द्रबहादुर बस्नेत दुईवटा डिलक्स बस किनेर कुदाएको दुई वर्ष भयो। १० वर्ष कतार बसेर कमाएको सम्पत्तिमा बैंकबाट ३० लाख ऋण लिएर लगानी गरेका थिए। किस्ता तिर्न र खान पुगिरहेकै बेला कोरोना महामारीले बस नकुदेको ६ महिना भयो। यो अवधिमा न उनले ६ जना स्टाफ पाल्न सकेका छन् न त बैंकको किस्ता र गाडी मर्मत गर्न नै।
लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधन सञ्चालनमा देशभर रोक लागेपछि सबै व्यवसायीको थाप्लोमा ऋणको बोझ छ। ‘सवारी नचलाउँदा आम्दानी त छैन नै। अब कुदाउन पनि सुरुमा लाखौं पुँजी चाहियो कता माग्ने ? ’, व्यवसायी बस्नेत प्रश्न गर्छन्।
सरकारले लकडाउनसम्मको कर मिनाहा गर्ने बताए पनि त्यसको परिपत्र नआउँदा यातायात कार्यालयका कर्मचारीले छुट नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘लकडाउनको समयमा कर नलिने बताए पनि त्यसको पनि जोडेका छन्। नकुदाएको समयको कसरी तिर्नु ? ’, व्यवसायी चौलागाईं प्रश्न गर्छन्। यातायात व्यवसायीले असोज ५ सम्मकै कर सरकारले छुट गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्ता मजदुरलाई केही समय व्यवसायी मिलेर खाना खुवाए पनि पछि लकडाउन र निषेधाज्ञा लम्बिँदा त्यो क्रम रोकिएको थियो। घर भएका केही मजदुरलाई व्यवसायीले घरै पुर्‍याए। तर, सबैको व्यवस्थापन गर्न भने नसकिएको व्यवसायी चौलागाई बताउँछन्।
‘हामी ऋणमा डुबेका छौं। मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘कोही घर बनाउने ठाउँमा सिमेन्ट र बालुवा घोल्ने काम गर्दै होलान्। कोही कसले देला र खाउँला भनेर सडकमै जीवन गुजारिरहेका छन्।’
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार यातायात व्यवसायीसँग छलफल चलाए। लामो समयपछि यातायात सञ्चालन हुने भएपछि यसलाई कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने भनेर आफूले व्यवसायीसँग छलफल गरेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ।
उनले यातायात व्यवसायीका साझा समस्या सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने भएकाले सरकारको मापदण्डमा रहेर निर्धकका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। लामो दूरीका यात्रुको विवरण राख्न आग्रह गर्दै व्यवसायीलाई सुरक्षा अपनाएर व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नरहेको बताए।(अन्नपूर्ण पोस्टबाट )